FIANGONANA ADVANDISTA SOAMANANDRARINY : NITROTRO AM-BAVAKA NY FIFIDIANANA – MyDago.com aime Madagascar
FIANGONANA ADVANDISTA SOAMANANDRARINY : NITROTRO AM-BAVAKA NY FIFIDIANANA
Nanatontosa fotoam-pivavahana lehibe ho fangataham-pitahiana ho an’ny tanindrazana androany ny Fiangonana Advandista Soamanandrariny, hitondrana am-bavaka ihany koa ny fandriam-pahalemana amin’ity fifidianana fihodinana faharoa ity. Tonga niombom-bavaka tamin’izany ny kandidà Jean-Louis Robinson sy i NenyLalao Ravalomanana. Tsy tonga kosa ny kandidà Rajaonarimampianina ary tsy nandefa solontena akory. Nalaina tao amin’ny Jaona 17 : 17-21 ny torinteny ka ny kandidà Robinson no namaky izany ary ny mpitandrina Samoely Lala James no nitondra ny hafatra . Niarahan’ny rehetra niredona ny « zanahary ô tahio ny tanindrazanay, handroso lalandava handry fahizay » Nisy ihany koa ny fandraisam-pitenenana nataon’ny solontenan’ny CENIT izay tompomarika tamin’ity fotoam-pivavahana ity ary nisaorany ireo tonga nanotrona izany, tsy tonga tamin’ity fotoana ity kosa ny filohan’ny CENIT Attalah Beatrice.
Auteur Solo Razafy*Publié le 7 décembre 2013 7 décembre 2013 Catégories Politique
5 pensées sur “FIANGONANA ADVANDISTA SOAMANANDRARINY : NITROTRO AM-BAVAKA NY FIFIDIANANA”
7 décembre 2013 à 22 h 20 min
Mahafinaritra ary miteny ny sary fa satana no ambadik’i ny fery vao2,
ary aiza i kala beatrisy koa miaraka aminy??ny devoliny mihintsy no nanakana azy
tsy ho tonga teto.
Fa maninona tokoa no tsy mandeha province e??toa i Tsega foana no lisaka nefa ao no tena be
alika tsisy fehy vozona.(imeritsiatosika io)
Homba sy hitahy antsika anie Andriamanitra!!
8 décembre 2013 à 4 h 30 min
Toa tsy nisy olona hono tany Haute Matsiatra. Izaho manokana mahita fa ilay olona mpanentana any mihintsy no tsy mahavoa. Olana mitovy t@ fihodinana voalohany ihany. Tokony mba tena mi-fonce isika ary soloina ny tomponandraikitra any. Tahak’izay ihany koa ny eto Antsirabe. Toa mangingina be ihany. ANTSIRABE ve 35 % fotsiny ny mpomba an-dRavalo. Tsy ampy fanentanana mihintsy e! Ilay Deo (UNDP) indray maresaka kokoa noho ny Mouvance Ravalo (députation). Mba henoy ihany e!
8 décembre 2013 à 6 h 28 min
ito resaka atolotr’i tovo eto ambony ito dia manintona tokoa
JEREO TSARA NY MIKASIKA IREO VOATANISA IREO E!
Fa ny zava-mitranga eto andrenivohitra (nitarina any @ province hafa)
dia mampiorina atidoha
fa kay itony artista dia nomen’i Andry Rajoelina vola hirotsaka ho candidat @ DEPUTation, amin’izay ho tafiditra PremierMinistre ilay bandit io candidat efa lany t@ FANONGANAM-PANJAKANA COUP D’ETAT 2009
8 décembre 2013 à 7 h 02 min
Tsaratsara kokoa raha tsy nandeha niangona tany @ advantista omaly fa novitaina aloha ny faritra avaratry ny nosy (DIANA,SAVA) dia tany no niangona androany dia notohizana ny alahady ariva ny faritra avartra. Tsy sanatria hoe mibaikobaiko na hoe tsy mahalala ny tokony hatao hianareo fa fitiavana no hitenenana izany.Mandeha be ny fotoana tompoko.
Be ny zavatra tsy fantatrao ka tsy omena tsiny ianao. Mila vavaka betsaka mitovy @ asa betsaka isika.
MISY DIKANY MATOA TSY MANAIKY HIVAVAKA TENY @ ADVANTISTA MIHITSY HATRAMIN’IZAY NY EKIPAN’NY TGV???? IZAY TENA MPANOMPO SAMPY ARA-BAKITENY…..NY MIFANOHITRA @ ZAVATRA ATAONY FOANA NO HISEHOANY ETY IVELANY……
TSY HO AVELAN’NY DEVOLY HANATRIKA FOTOAM-PIVAVAHANA TOY ITONY VELIVELY NY TGV E…..
Précédent Article précédent : FILOHA RAVALOMANANA : « TANDREMO ADINO NY MIFIDY NY SOLOMBAVAMBAHOAKA, AMIN’IZAY I NENY KOA TAFAVOAKA »
Suivant Article suivant : ME HANITRA RAZAFIMANANTSOA : FOTOANA IRAY HIHAINOANA , NY TANORA, NY VAHOAKA , NY ZOKIOLONA IZAO